December 2018 – Esancharpati
5 months ago Monday, December 31, 2018
बैतडी । सुर्नया गाउँपालिका–४ मा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय फाटीगडामा खानेपानी नहुँदा त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकले समस्या व्यहोर्नु परेको प्रधानाध्यापक गङ्गादत्त भट्टले बताए । हिउँदयामको शुरुआत भएसँगै जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा खानेपानी अभाव हुन थालेको छ । करीब ४५० विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा पानीको अभावले शौचालय पनि बन्द गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । सो विद्यालयमा पहिले […]
गोविन्द केसी अनशन बसे, म पनि उहाँको बिरुद्धमा अनसन बस्छु ः थापा
काठमाडौं, १६ पुस । सामाजिक अभियन्ता एवम् विद्यार्थी विजय थापाले संसदमा पेश गरिएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक कुनैपनि हालतमा पास गर्न नहुने बताएका छन । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर थापाले आफुले ५३ दिनसम्म भोक हड्तालमा बस्दासमेत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो पोख्दै चिकित्सा शिक्षा विद्येयक तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले […]
‘गणतन्त्रकी राष्ट्रपति राजाभन्दा महंगी :::पशुपति सम्सेर राणा
काठमाडौं, १६ पुस । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विलाशीपनले मुलुकमा नयाँ प्रश्न जन्माएको टिप्पणी गरेका छन । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘गणतन्त्रकी राष्ट्रपति किन महंगी बन्दै हुनुहुन्छ ? करोडौंका गाडी चाहिने ? अर्बौको हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्ने ? अहिलेको विशाल शितलनिवास राष्ट्रपतिज्यूलाई सानो भयो […]
5 months ago Sunday, December 30, 2018
काठमाडौं, १५ पुस । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले देश गम्भिर मोडतर्फ गैरहेको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले पृथ्वीनारायण शाहको २९७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. केसीले यस्तो बताएका हुन् । स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केसीले भने,‘अहिले भैरहेका गतिविधिहरु […]
काठमाडौं, १५ पुस । ‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ नामक अभियानले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य, उपभोत्ता र ट्याक्सी चालकहरुबीचमा देखिएको द्धन्द्धलाई न्युनिकरण गर्नको लागि उक्त साझा पहलको सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र […]
The way to pick outajournal for your analysis posting? Lastly, you need to make sure you are really performingagreat article
5 months ago Saturday, December 29, 2018
काठमाडौं, १४ पुस । सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र नेपाल सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ । उक्त मस्यौदामा आफूहरुको सुझाव समावेश नगरिए कुनैपनि हालतमा प्रतिवेदन स्विकार नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ र संघले […]
‘बम्जन निर्दोष हुनुहुन्छ -बोधि श्रवण धर्म संघ,
काठमाडौं, १४ पुस । बोधि श्रवण धर्म संघले आफ्ना गुरु राम बहादुर बम्जनमाथि लगाईएका आरोपहरु निराधार, भ्रामक र कपोकल्पित रहेको स्पष्ट पारेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर हालै आनी बनेर आश्रममा बसेका केही मानिसहरु बेपत्ता पारिएको भन्दै आफ्नो गुरु बमजनमाथि कपोकल्पित आरोप लगाएको जिकिर गरेको हो । संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष […]